चाणक्य नीतिः श्रीमती र सन्तानको अगाडि भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम, घाटा हुन सक्छ
HomeDharmaचाणक्य नीतिः श्रीमती र सन्तानको अगाडि भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम, घाटा...
नीति शास्त्रमा आचार्य चाणक्यले जीवनसँग सम्बन्धित धेरै पक्षहरू उल्लेख गरेका छन्। आचार्य चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री, बौद्धिक र शिक्षाविद् मा धनी मानिन्छ। भनिन्छ, चाणक्यलाई जीवनसँग सम्बन्धित हरेक विषयको गहिरो ज्ञान थियो। चाणक्यका नीतिहरू आज पनि सान्दर्भिक छन्। यी नीतिहरू अपनाउनेहरूले जीवनमा कम असफलताको सामना गर्ने विश्वास गरिन्छ। चाणक्यले नीति शास्त्रमा यस्ता कुरा उल्लेख गरेका छन्, जुन पत्नी र सन्तानको अगाडि भन्नु हुँदैन ।
1. अपमानजनक शब्दहरू नगर्नुहोस्- चाणक्य भन्छन् कि शब्दले प्रहार गर्दा सबैभन्दा ठूलो चोट लाग्छ। त्यसैले श्रीमती र सन्तानको अगाडि सधैं सोचेर बोल्नुपर्छ । जसरी तपाईं तिनीहरूको अगाडि व्यवहार गर्नुहुन्छ, तिनीहरूले तपाईंको अगाडि गर्नेछन्।
2. गलत व्यवहार नगर्नुहोस्- आचार्य चाणक्य भन्छन् कि जब हामी बोल्छौं वा कुनै काम गर्छौं, तब बच्चाहरूले पनि त्यसलाई पछ्याउँछन्। त्यसैले हामीले बालबालिकाको अगाडि कृतघ्न हुनबाट जोगिनु पर्छ। साथै श्रीमतीसँग कहिल्यै पनि दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन । पत्नीलाई लक्ष्मीको रूप मानिन्छ । भनिन्छ, यसो गर्नाले देवी लक्ष्मी क्रोधित हुन्छिन् ।
3. सधैं मायाको साथ व्यवहार गर्नुहोस्- चाणक्यका अनुसार, छोराछोरी र पत्नीले कहिल्यै त्यस्तो कुरा बोल्नु हुँदैन जसमा उनीहरूलाई पीडा हुन्छ। बालबालिकाको अगाडि दुव्र्यवहार गर्दा उनीहरुको आत्मविश्वास कम हुन्छ । जसका कारण घरघरमा दु:ख छ । त्यसैले श्रीमान्–श्रीमतीबीचको सम्बन्धलाई तनावमुक्त राख्न सधैं मायाले कुरा गर्नुपर्छ ।
4. अनुशासनबाट बच्नुहोस्- चाणक्य भन्छन् कि यदि तपाईं घरको वातावरणलाई रमाइलो राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो अनुशासन पालन गर्नुपर्छ। जब तिमी अनुशासित हुन्छौ, तब तिम्रो श्रीमती छोराछोरी पनि अनुशासित हुन्छन्। क्रोधबाट टाढा रहनुहोस् र सधैं नम्रतापूर्वक बोल्नुहोस्।
See also सपनामा हात्ती देखेमा के फल प्राप्त हुन्छ ?
Previous articleकरोडपति बन्नेका हातमा यस्ता रेखा हुन्छन्, तपाईको हातमा छ ?
Next articleयी मानिसहरूलाई आर्थिक संकट हुँदैन, लक्ष्मी माता यिनीहरूको सहयोगी हुन्छिन्।